Nhau - Chii chinonzi Optical Sefa?
Kune matatu matatu mafirita e-opareta Iyo ipfupi firita inobvumira mapfupi marefuvelengths kupfuura akachekwa wavelength kuti apfuure nepakati, nepo ichideredza marefu marefu. Zvakare, iyo yehurefu firita inofambisa yakareba wavelengths pane iyo yakatemwa-pane wavelength iyo ichivharira ipfupi wavelengths. Bhendi firita firita inoita kuti imwe nhanho, kana "bhendi", yemarevellengths ipfuure, asi inodzivirira ese wavelengths akatenderedza bhendi. Iyo monochromatic firita inyaya yekunyanyisa yeiyo bandpass firita, iyo inongotenderedza chete yakamanikana kwazvo renji yevelengths.
Iyo yefaera firita inosarudzika inoshambadzira chikamu chimwe cheiyo optical spectrum, ichiramba zvimwe zvikamu. Inowanzo shandiswa mu microscopy, spectroscopy, kuongorora kwemakemikari, uye chiratidzo chemuchina.
Optical mafirita mapusa zvigadzirwa zvinobvumidza kufambiswa kweiyo chaiyo wavelength kana seti yevevelengths yechiedza. Kune makirasi maviri eanopisa mafirita ane nzira dzakasiyana dzekushanda: mafirita ekupinza uye mafirita eichichic.
Mafirita ekupinza ane chifukidzo chemhando dzakasiyana dzezvinhu zvakasikwa uye zvisina kujairika izvo zvinotora mamwe marefu evhenekeri, nokudaro zvichibvumira iwo marefu evanodikanwa kupfuura. Sezvo ivo vachitora mwenje wesimba, tembiricha yeaya mafirita inowedzera panguva yekushanda. Iwo mafirita ari nyore uye anogona kuwedzerwa kune mapurasitiki kuti aite mafirita anodhura pane avo girazi-based avo. Iko kushanda kweaya mafirita hakunei nekona yechiitiko chechiedza asi pane izvo zvinhu zvechinhu chinogadzira mafirita. Nekuda kweizvozvo, iwo mafirita akanaka ekushandisa kana kuratidzwa mwenje wenguva isingadiwe wavelength kunogona kukonzera ruzha muchiratidzo che optical.
Dichroic mafirita akaomesesa mukushanda kwavo. Izvo zvine akateedzana eakashongedzwa ekupenya ane chaiwo mukobvu ayo akagadzirirwa kuratidza asingadiwe wavelengths uye kufambisa inodiwa wavelength renji. Izvi zvinogoneswa nekukonzera iwo anodikanwa wavelengths kuti apindire zvinovaka parutivi rwekutapirisa rwefirita, nepo mamwe mavelengths achipindira zvinovaka parutivi rwefirita.